Ndị ọkachamara na Semalt na-ekwusi ike na I Kwesịrị Ịmekọrịta AMP nke Google na Strategy Strategy - Nke a bụ Ntak
Imewanye Mpempe akwụkwọ Mpempe akwụkwọ (AMP) bụ ọrụ mmeghe nke Google nke na-ekpughe ihe e kere eke nke kachasị mma. Ndị na-ebipụta ihe bụ ndị na-erite uru nke ọrụ a dị ka ọ na-ebute n'uche iji mepụta ngwa ngwa nke saịtị na ngwaọrụ mkpanaka. Ọ bụ eziokwu zuru ụwa ọnụ na ịnweta ngwa ngwa bụ ihe dị mkpa maka engines ọchụchọ, ugbu a bụkwa nchegbu a na-apụghị izere ezere na ahịa ịntanetị.
Ivan Konovalov, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ọrụ nke Semalt , na-akọwa otú AMP si Google na-emetụta ahịa n'ịntanetị.
Ebe saịtị AMP-enyere nwere uru abụọ dị na SEO.
Mbụ, AMP na-emetụta otu n'ime ihe ndị dị elu kachasị elu nke Google ji eme ihe: mkpanaka nke kachasị mma. N'ezie, enwere nkọwa na AMP nwere ike ịghọ ihe dị mkpa, mana nke ahụ ka ga-ahụ.
Ileghara anya na mobile bụ ihe na-egbu egbu taa dịka ọtụtụ ndị ọbịa nke ebe nrụọrụ weebụ na-eji ngwaọrụ mkpanaka karịa na ha na-eji kọmpụta. Ma, ị nwere ike ịrụ ụka na AMP abụghị naanị ụzọ isi mee ka mkpanaka nyochaa ọdịnaya. Otú ọ dị, cheta na ịghara iji AMP enye ndị na-asọmpi gị ndị jiri AMP aka.
Nke abuo, saịtị ahụ na-enweta akara aha "Ngwa ngwa" na ntinye akwụkwọ ọchụchọ search (SERP). Mgbe onye na-agụ na-eme nyocha ọ bụla, Google na-akwalite carousel gaa n'elu SERP. Carousel a nwere ọdịnaya site na saịtị saịtị AMP. Onye na-agụ ihe ahụ nwere ike jiri nwayọọ pịa ọ bụla nke isiokwu.
Nke a sụgharịrị iji mụtakwuo ihuenyo peeji, nkwupụta mgbasa ozi dị elu na ịkekọrịta, ma mezie mmekọrịta mmekọrịta / mbipụta. Nlekọtawanye site na carousel nwere mmetụta ndị a na ntanetị n'ịntanetị:
Onu ogugu di elu karia:
Ọdịnaya nke gosipụtara na carousel nwere ọkwa dị elu na ihe gbasara nke puru omume nke onye na-agụ na-abanye na weebụsaịtị. Nke a pụtara na ọkara nke agha nke ịbata ndị ọbịa na saịtị gị enweelarị mmeri.
Inwekwu ikike ikike:
Ndị na-agụ akwụkwọ nwere mmasị na ọdịnaya ndị dị na carousel, n'ihi na ha chere na ọ bụ nke dị elu (n'ihi gịnị ka Google ga - eji tinye ya na ibe ha ọ bụla?)
Ọnụ ọgụgụ dị elu site na ọnụego na ụba ikike ikikere na-ebute ntanye mgbasa ozi dị elu-site ọnụego. Ebe ọ bụ na saịtị AMP enwere ike inwekwu echiche ma gosipụta ntụkwasị obi karịa akwụkwọ AMP, ndị na-agụ ya ga-enwe ike pịa mgbasa ozi.
Ahụmalitere ọrụ onye ọrụ:
Ahụmahụ onye ọrụ nwere mmetụta dị ịrịba ama na ọganihu ma ọ bụ ọdịda nke ahịa ahịa n'ịntanetị. Ndị mmadụ na-eji igwe mkpanaka arụ ọrụ ịntanetị anaghị amasị saịtị ndị na-ebu nwayọọ nwayọọ ma ọ bụ na-eri data ha. Nnyocha egosiwo na ọtụtụ ndị ọbịa agaghị eche ihe karịrị sekọnd ole na ole maka saịtị iji kwụọ ụgwọ.
AMP na-egbutu oge na-erughị ọkara nke abụọ, nke dị ugboro anọ karịa ngwa ọsọ nke saịtị na-abụghị AMP. Ọ na-enyekwa ndị ọrụ aka ile ọdịnaya anya n'enweghị ịbịa na saịtị (site carousel). Onye ọrụ naanị na-eleta saịtị ahụ n'ezie ma ọ bụrụ na ọ na-amasị ihe na-egosi na carousel. Nke a na-enyere onye ọrụ ahụ aka ịchekwa data mkpanaka na ndụ batrị.
N'ezie, AMP anaghị enwe mmetụta ọjọọ na ntanetị n'ịntanetị. Ọ naghị arụ ọrụ maka saịtị ndị na-abụghị ndị nkwusa. Ọzọkwa, a chọrọ CMS na-akwado AMP, nke nwere ike ịpụta ụba mmefu ego. N'ikpeazụ, enwereghị ụdị mpempe akwụkwọ AMP, nke pụtara na ị pụghị igbanye ndu site na ndebanye aha. Enwere ike idozi nsogbu a site na nkwalite nke na-enye ndị nkwusa ohere iji ụdị ha na-eme atụmatụ AMP-kachasị mma, ihe Google nwere ike ịrụ ọrụ.
AMP bụ mmetụta dị oke nhịahụ na ịntanetị taa ma yie ka ọ na-enweta traction site n'ehihie ọ bụla. Ọ bụ ihe amamihe karie ka ị tụlee otú ị ga-esi tinye ya n'ime atụmatụ gị, kama ịkwa ụta mgbe e mesịrị n'ihi na ị naghị eji ya mgbe ndị ọ bụla gị na-asọmpi mere Source .